Buddhism » ရွှေတိဂုံနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Shwedagon Pagoda	17
ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ About Ma Ma
Mr. MarGa says: သူများတွေ တကူးတကလာတယ်
pooch says: အံ့ပါ့ ငါဆို ရွှေတိဂုံဖူးချင်လို့ကို ဟိုရက်က သွားဖူးတာ မနက်ရော ညရော ၂ ခေါက်တန်အောင် ဖူးပစ်ခဲ့တာ
ကျန်တဲ့နေရာတွေက အချိန်ရလို့ ပတ်တာ မမရေ ရွှေတိဂုံက အနော့်စိတ်ထဲမလဲ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ… ယိုးဒယားတိုင်းပြောတာ ရွှေတိဂုံကရွှေတွေက သူတို့ဟာတွေ… တဲ့
kai says: အ ယုဒ္ဓယ = လုပ်ကြံ၍.. စစ်တိုက်၍ မရနိုင်သော လို့အဓိပ္ပါယ်ရသတဲ့..။
ထေရာဝါဒတို့ရဲ့.. နိုင်ငံတခုပါ.. တခုပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: OMB အိုး မိုင် ဗုဒ္ဓ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အန်တီမမရဲ့ရွှေတိဂုံကိုပီတိအပြီး အရီးရဲ့ ဘာသာရေးထဲဝင်ပြောချင်လို့
Ma Ma says: ကြိုက်တယ် နန်းတော်ရာသူရေ။
အလင်းဆက် says: ထိုင်းခရီးသွားတွေကို မြင်တာနဲ့ပဲ… မနက်က ဖတ်မိတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် သွားသတိရတယ်ဗျ ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းက အိမ်ထောင်စုတွေမှာ အကြွေးထူမှု ပြဿ နာ တစတစ ပိုပြီး ကြီးထွားလာနေကြောင်း…ဆိုတာလေး… နောက်ပြီး ဟိုနေ့က ဖေ့ဘုတ်မှာ တွေ့လိုက်တာလေ…
ရိုက်သတ်လို့တောင်ကုန်အံ့မထင်… ပိုစ့်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာတွေ ဝင်ပြောသွားတဲ့…
Mike says: .ပန်းတွေကတော့တကယ့် ထိုင်းစတိုင်ပဲ
.အင်း..မမ ကတော့ တစ်သိန်းစီမံချက်စနေပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .အန်တီမမပုံတွေ မြင်တော့မှ ရွှေတိဂုံကိုမရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီလို့ တွေးမိတယ်….။ ကမ္ဘာကပါ တရိုတသေနဲ့ လာလေ့လာရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာ…ဂုဏ်ယူစရာ….
La Yeik says: အပေါ်ဆုံးပုံက နေရာလေးက ထိုင်လို့ကောင်းတယ်….သူတို့က ဘယ်နှစ်ပတ်မှန်းမသိ လက်ယာရစ်ပူဇော်တယ်တဲ့…ကိုယ်တွေတော့ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် မနည်းပဲ..နေပူလို့..ရွှေတိဂုံဘုရားဆိုတာမြန်မာတွေအတွက် ဘာနဲ့မှ ယှဉ်မရတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာပဲပေါ့….
ခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/mingalapar01/photos/pcb.811359955609384/811358738942839/?type=1&theater
Ma Ma says: အဲ့ပုံက မိန်းကလေးက မြန်မာ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတာတော့ တွေ့ခဲ့သေးတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ထိုင်းတီလုပ်တွေ ဘုရားပေါ်လာပြီး တိရစ္ဆာန်အကောင်လိုက် ပူဇော်တာတော့ အမြင်ရိုင်းသဗျာ။ ကပ်ခြင်ရင် အိမ်မှာပွဲလုပ်ကပ်ပေါ့။။ မြန်တျန့်ရိုးရာ အစဉ်အလာနဲ့ မအပ်စပ်ပါ။ နောင်ဒါမျိုး ထားမြစ်သင့်အိ…။
manawphyulay says: အင်း ဘုရားကတော့ အရင်က တစ်ပတ်တစ်ခါဆိုသလို အသင်းမှာ တံမြက်စည်းလှည်းတော့ ရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ချီနေပါတယ်။ ခုတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့် မရောက်ဖြစ်တာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထဲမှာ တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်လိုပဲ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ သန့်ရှင်းရေး သွားလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဦးမှာပါပဲ။ ညနေပိုင်းချိန်တွေဆို တရားထိုင်လို့ ပိုကောင်းတယ်။ အေးချမ်းတယ်။ စိတ်ကြည်လင်တယ်။